Chinja Android kuva iPhone isina midzi kana kupenya tsika ROM. Isa iOS pane Android foni neiri nyore nhanho gwara. Nhare dzeAndroid dzakakurumbira nekuda kweiyo vhezheni yavo yakasikwa iyo inoita kuti zvive nyore kuzviita. Nekudaro, kana iwe uchitsvaga mhando, saka maApples iPhone ndoanowanzoitirwa vanhu. Apple inozivikanwa nekuchengetedza kwayo, kunaka uye maitiro. Uye icho chikonzero nei vanhu vanopenga chemhando iyi. Izvo zvinotarisirwa kuti kana iwe uchinge watanga kushandisa iyo iPhone, iwe uchainakidzwa nayo zvakanyanya zvekuti ichakudzivisa kubva pakudzokera kuAndroid. Asi sezvo isu tese tichiziva zvinhu zvikuru zvinouya nemutengo mukuru. iPhones dzinodhura zvekuti vanhu vashoma chete ndivo vaikwanisa kutenga.
Saka mune iyi dzidzo, isu tichadzidza kushandura yako Android smartphone muApples iPhone. Nekutevera mirairo yakapihwa pazasi, iwe uchave unokwanisa kuve neiyo yakafanana imba chidzitiro, chidzitiro uye kutonga pakati senge iPhone. Saizvozvo nzira iyi inokuita kuti unakidzwe nokushanda kweimwe nharembozha paunenge uine kutaridzika kweimwe. Kana iwe uri mhando uyo anoda kuita kuti yavo Android iite seye iPhone, saka ichi ndicho chinyorwa chako.
Kana iwe uchida iyo chaiyo iOS kutaridzika, saka zvirinani kuti uzvitorere wega iPhone. Uku kudzvinyirira kuchachinja chete kutaridzika kweye yako Android kuve iPhone. Izvo hazvisanganise chero software kana firmware yekugadzirisa. Uyezve hapana kudikanwa kwekudzura midziyo yako yeAppor. Tevedza nhanho nedanho mirairo yakapihwa pazasi kuti uchinje yako Android ive iPhone.
Maitiro ekuchinja Android Kuti ive iPhone:
1. Kugadzira Imba yechiso senge iPhone
iPhone ine app dhizaina pasina chero Home chidzitiro. Ipo Android iine zvigadzirwa zvepamba pamusoro peiyo dhizaivha. Iyi nzira yakawanda yeaapp ndeye kunze kweiyo nzira uye chete izvo zvauri kuda kuona zviri pachiratidziro chemba. Ngatiitei yako Android kumba chidzitiro shanduko ive iPhone.
Step 1: gadza XOS Launcher kubva paGoogle Play Store.
Step 2: Vhura iyo xOS Launcher.
Step 3: Dzvanya pane Zvakaitika sarudzo.
Step 4: Sezvaunodzvanya pane izvo, iyo huru skrini inoratidzwa sezviri pazasi:
Step 5: Tinya Bhatani repamba uye sarudza xOS seyakatsetseka Imba rekutanga screen.
2. Kugadzika iPhone Wallpaper paImba yemuchina
Ingori iyo iPhone inotaridzika yakafanana neye pamba skrini yega haizopa manzwiro akazara eSpy pane yako Android. Kune izvo iwe unoda yazvino iPhone wallpapers.
Step 1: Dhawunirodha uye utevedzere izvi iPhone Mapikicha pafoni yako.
Step 2: Wobva wavhura chero mufananidzo uye Mugadze se Wallpaper.
3. Kuisa iPhone Ziviso pa Android
Kuwana zvikwangwani zvakaita sepa iPhone kuchapa kunzwa kwakazara kwe iOS pane yako Android kifaa. Kune izvo, tinoda iNoty app. Nesura iyi iwe unogona kuona zvese zviziviso uye nekukasira kusvika kwavari zvisinei kuti uri skrini ipi. Iyo inoratidza yakazara iOS senge masheji, pamwe chete nesimba rechiratidzo, bhatiri muzana, mutakuri uye zvimwe zvakawanda.
Step 1: Isa uye utange iyo yeNoty app.
Step 2: Gonesa sarudzo yeNoty.
Step 3: Ita zvakare mukana wekuratidza bhatiri muzana.
Step 4: Swipe kuzasi kuti uongorore iyo yeNoty notices.
Step 5: Swipe Kuruboshwe kana kudzvanya pane All sarudzo.
Step 6: Kuwanika kunofanirwa kuvhurwa kuti vatarise zvinyorwa. Saka tinya pa Turn it on now sarudzo.
Step 7: Mune Menyu Inowanikwa, tinya paNoty.
Step 8: Tendeuka.
Step 9: Kuti ugamuchire chiziviso tinya pane OK sarudzo.
Iye zvino unotarisa zvese zviziviso kubva kuNoty app.
4. Kuwana Kudzora Center like iPhone
NeDhivha Inodzora, iwe unogona nekukasira kupinda mukati memazhinji zvigadziro uye maapulo Iyo Ndege Mode inogona kuwanikwa nyore nyore kuti vadzime pakarepo Bluetooth, WiFi, uye mafoni kubatana. Ipapo Wi-Fi inogona kuvhurwa pakarepo kuti ubhurawuze pawebhu. Kunyarara kunodaidza, kunyevera, uye zviziviso nae hazvivhiringidze sarudzo.
Zvakare kupenya kwekuratidzira kwako kunogona kugadziriswa zviri nyore. Control Center kunyange inokupa iwe sarudzo senge pombi pfumo, Alarms uye Timer, Kamera, Audio mutongi, Screen rekodhi, Calculator uye zvimwe zvakawanda. NeKuwonesa Center app, unogona kuwana nekukasira kupinda sarudzo dzakafanana neP iPhone.
Step 1: kuisa Control Center IOS 12 app kubva kuGoogle Play Store.
Step 2: Tanga iyo Yekudzora Center IOS 12 app.
Step 3: Kubva pane Kubata Zvirongwa, tinya Position sarudzo.
Step 4: Wobva wasarudza pazasi chinzvimbo sarudzo.
Step 5: Mune iyo Advanced sarudzo menyu, kuderedza kukura kusvika zero.
Step 6: Wobva wawedzera iwo Ruvara kusvika pazere sezvakaratidzwa pasi apa:
Step 7: Ndizvo zvose! Ingo dzokera kuchikero chikuru uye Swipe munzira yekumusoro kuti uone iyo Dhivha Center.
5. Kuwana Kinodhi se iPhone
Kuchinja kiyuta yako yeGoogle kuti iite seSpy inoita seyakareruka. Izvo zvaunoda ndeye Emoji Keyboard 7 app. Inozoita kuti foni yako inyorove uye iite seyakafanana ne iPhone.
Step 1: gadza Emoji Keyboard 7 kubva paGoogle Play Store.
Step 2: Tanga purogiramu yacho.
Step 3: Dzvanya paEnsa Emoji Keyboard 7 sarudzo.
Step 4: Pane rinotevera chidzitiro, gonesa iyo Emoji Keyboard 7 sarudzo.
Step 5: Wobva wadzvanya pane OK sarudzo.
Step 6: Dzvanya pa switch kuna Emoji Keyboard 7 sarudzo.
Step 7: Chinja kabhodhi kuEmoji Keyboard 7.
Step 8: Wobva watsvaga iyo White Flat7 woisarudza.
Step 9: Ndizvo! Ingo tarisa yako Yekhibhodi nyowani iyo ichave yakafanana ne iPhone.
6. Kugadzika iPhone Mahoni pane Android
Android inogona kuva nemhando dzakawanda dzakasiyana dzekurira. Asi iPhone inozivikanwa chaizvo nekwavo kwakasiyana ringtone. Saka kana iwe uri kuchinjisa yako Android kuva iPhone saka kuwana yakakurumbira iOS ringtone inofanirwa.
Step 1: kuisa Rironi ye iPhone kubva kuGoogle play Store.
Step 3: Dzvanya pane chero ringtone yaunoda.
Step 4: Wobva waigadzika seinodaidza wekumuridza, toni yekuzivisa kana seyenzwi rekuraisa.
Step 5: Iwe unogona kunyange kugovera iyo ringtone zvakananga paWhatsapp kana kuburikidza neipi svikiro.
7. Kugadzika kukiyuta ye iPhone pa Android
Ita kuti yako Android itaridzike se iPhone kunyangwe chidzitiro chakakiiwa. Izvi zvinogoneka neese mitsva iLock yekukiya screen app. App iyi ichapa yako Android nyowani inozorodza iPhone yekukiya skrini ine notices maonero.
Step 1: kuisa iLock yekukiya skrini kubva kuGoogle play Store.
Step 3: Vhura iyo Inogonesa / Regedza kukiya skrini sarudzo.
Step 4: Zvakare vhura iyo Inogonesa / Regedza Passcode.
Step 5: Pane rinotevera chidzitiro, isa chero Pin kodhi.
Step 6: Ndizvo zvose! Ingochinjisa kiyi yemagetsi uye tarisa yako itsva iPhone yekukiya skrini.
8. Kugadzika iPhone Call screen pa Android
Kana iwe uri kuchinjisa yako Android kuva iPhone, saka usakanganwa yakasarudzika yekufona id inoshandiswa ne iPhone. Iine iCall Screen app, unogona kuwana iyo yakafanana slide yekupindura iPhone kufonera skrini pane yako Android kifaa.
Step 1: kuisa iCall Screen kubva kuGoogle play Store.
Step 3: Dzvanya pane Grant yemvumo sarudzo.
Step 4: Dzvanya pane Bvumira sarudzo yekuwana iyo app kuita uye kubata mafoni.
Step 5: Zveka zvakare tinya pamusoro peVabvumira sarudzo yekubvumira iyo app kushandisa ako anokutaura.
Step 6: Kuti uwane mapikicha, midhiya uye mafaera tinya pane Kubvumira sarudzo.
Step 7: Dzvanya pane Grant yemvumo sarudzo.
Step 8: Ipa mukana weziso rekufona screen.
Step 9: Dzvanya paBvumira.
Step 10: Ndizvo! Unogona kushandura marongero, kumashure, maburi ekurira uye nezvimwe zvakawanda pamwe neapp iyi.
Zvino pese paunoita kana kugamuchira mafoni, iwe unosvika pakuona chaiyo iPhone yekufonera skrini.
Ndizvo zvose! Iwe wakanyatso shandura yako Android kuva iPhone. Ita mhinduro pazasi kana iwe ukaona chero chakaoma. Kusvikira ramba uchinyemwerera uye Runyararo kunze!
Maitiro ekuseta ringtone pa iPhone yako uchishandisa GarageBand uye iTunes
Wepamusoro 10 Yemahara Yemahara ringtone Mapurogiramu eApple Muna 2017
Maitiro Ekugadzira iPhone Tsika Rwiyo paMac uye Windows